Uchwepheshe we-Semalt: Kungani Futhi Ungasebenzisa kanjani i-Amazon ukwakha umkhiqizo we-E-Commerce?
Indawo yezimakethe ze-Amazon isebenza njengesiteji lapho abantu beqala khona imikhiqizo futhi bafundemayelana nokuziphatha kwabathengi. Isiza ukuqalisa osomabhizinisi abaqhamukayo. IbhizinisiIwebhusayithi ingenza kahle uma iqhathaniswa nesilinganiso semakethe. Ukusebenzisa emakethe njengenye indlela yokuthola imali yinzuzo eyengeziwe - ubiquiti windows.
I-Artem Abgarian, iMenenja Ephumelele Yempumelelo Yekhasimende i-Semalt ,ichaza ngokusebenzisa i-Amazon ukwakha umkhiqizo we-e-commerce ophumelelayo.
Ngaphambi kokubona amandla okuthenga emakethe, kuwukuhlakanipha ukuqala ngeeziyisisekelo. Ama-Amazon azisiza ekuthengeni kwamakhasimende kwamabhizinisi. Ekugcineni, lapho umuntu ejwayele ukuthi isebenza kanjani, kuphela lapho angakwazi ukukwenza khonaamandla okusebenzisa ama-Amazon ukukhulisa umkhiqizo.
Ama-akhawunti angu-Amazon angamaphesenti amahlanu namashumi amabili okusesha. Kwesine yesine ka-2016,Ama-Amazon ayephethe amaphesenti angamashumi ayisithupha kuwo wonke ama-e-commerce yokuthengisa. Okokugcina, iningi lezizinto ezithengiswa epulatifomu zivela kumuntu wesithathuabathengisi.
La maqiniso abonisa ukuthi iningi lala maklayenti ahamba njalo e-Amazon ukuze afuneimikhiqizo. Ngakho-ke, ukuyisebenzisa ekuqapheliseni brand kanye nokuqwashisa amakhasimende kuzosiza ibhizinisi ukugxila umkhiqizo isethi nokumaketha ezizungezileimibono kuze kube yilapho ingabamba khona ukuncintisana phezulu.
Ukusebenzisa i-Amazon, kuhambisane nemikhombandlela yokuthengisa ibhizinisi kumakhasimende angakhona.Noma kunjalo, ama-Amazon avumela ibhizinisi ukuba lihlele ukuziphatha kwabo kokuthenga ukuze kufike lapho kudingeka khona ukuvakashela iwebhusayithi yenkampani. Ngokwesibonelo,ikhasimende lingathenga umkhiqizo othile kusuka enkampanini, kodwa ukushintshwa kuyatholakala kuphela kwiwebhusayithi yabo..
ama-Amazon ukwakha ukuqwashisa
Izikhangiso ezixhasiwe ku-Amazon zifana ne-AdWords njengoba zithembela kumazwi angukhiye. Uxhasiweizikhangiso ziyadingeka ngoba osomabhizinisi angasebenzisa ukukhomba izinkampani ezithinta imikhiqizo efanayo. Izindleko zokuchofoza zingaphansi kweukukhokha okukhokhelwayo.
i-Amazon ne-SEO value
Uma ibhizinisi liqala ukwandisa ekuthengiseni, kukhona amathuba okuba ukuthiimikhiqizo yabo izoqala ukuvela phezulu ku-Amazon's search ranking. Ngenxa yalokho, i-Google izothatha lezi zimfanelo eziphezulu. Ukusebenzisa umkhiqizoamagama angukhiye njengoba ithuluzi eliyinhloko lokuseshwa okuphilayo ku-Google lizoqondisa amakhasimende kwimikhiqizo yenkampani.
Ngezingcingo eziphilayo, nokushayela amakhasimende e-Amazon, abathengi bazoqaphela ukuthi i-Imikhiqizo eqinile ivela kumasayithi amaningana. Ikhuthaza ukuzethemba abathengi. Uma inkampani idayisa imikhiqizo yayo ngendlela efanele,bayoqiniseka ukuthi banikeza izibuyekezo ezinhle. Ukubukezwa kwezinkanyezi kusho okuningi kumakhasimende angafaneleki.
Kunezimboni eziningi eziphathelene nabahwebi ngaphambi kokuba bahlanganyele ne-Amazon:
i-Amazon ikhipha umkhiqizo ngaphandle kwesizathu. Akulona iqiniso njengoba isisekelo somkhiqizolithembele kumuntu wesithathu uma nje isebenza ngaphakathi kweziqondiso ze-Amazon.
I-Amazon ithatha ibhizinisi uma iqeda. Abasebenzi base-Amazon bacela abantu ukuthi bakhethephakathi kokuba umthengisi wemakethe noma umthengisi, kodwa isinqumo siphelele ngokuphelele kumuntu ohilelekile.
i-Amazon ihlukanisa phakathi nesitolo esivamile se-e-commerce. Kuyinto isitolo e-commerce ngeukucinga okuzakhelwe ngaphakathi futhi okuyigama eliyinhloko eliqhutshwa njenge-Google.
Ukuthengisa ku-Amazon kuyisinqumo esisekelwe esinqumweni futhi usebenzise isilinganiso esifanele sokulawula.Izinhlu eziningi zikhona e-Amazon ngebhizinisi ukuthengisa nokuthola amakhasimende. Umnikazi unquma isu elihle kakhulu kubo.